Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na di na nwunye ahụ dị anya | Bezzia
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na di na nwunye ahụ dị anya
Maria Jose Roldan | 06/04/2021 22:13 | Mmekọrịta
Chọpụta na onye òtù ọlụlụ ahụ dị anya bụ otu n’ime ụjọ ndị ndị nọ na ya. Hapụ nkewa nke nta nke nta na-eme ka ihe ghara ịdị ka mmalite nke mmekọrịta ahụ, na-eme ka ụjọ na ọ bụ njedebe ya.
N'iburu nke a, onye ahụ metụtara amaghị ihe ọ ga-eme, iji gbalịa ime ka ihe niile laghachi na mbụ dịka ọ dị na mbụ. N'ọnọdụ ndị dị otú a, ọ dị mkpa ịchọta ihe kpatara ya ma ọ bụ ihe kpatara otu n'ime ndị ahụ nọ na di na nwunye ji dị anya site na onye nke ọzọ.
1 Nkekọ dị n'etiti di na nwunye ahụ
2 Ihe ndị kpatara esemokwu n’etiti di na nwunye
3 Otu esi eme ma ọ bụrụ na onye òtù ọlụlụ ahụ dị anya
Nkekọ dị n'etiti di na nwunye ahụ
Di na nwunye ga-eme ka ha dịkwuo ike ma too, ọ dị mkpa ka ha dịrị n’otu. A gha inwe nkweko obula dikwa na inye ihe na inara ihe. Ọ bụrụ na nke a emeghị, ọ ga-ekwe omume na njikọ ahụ ga-eji nke nta nke nta belata ma nhapụ nke otu n'ime ndị ọzọ ga-amalite. Ka njikọ ahụ wee sikwuo ike, a ga-enwerịrịrịrị afọ ojuju site na ndị otu abụọ na ọkwa mmụọ na nke mmetụta. Ọ bụrụ na nke a emeghị, ọ bụ ihe dịkarịsịrị njọ na otu onye n’ime ndị otu ahụ ga-anọ n’ebe dị anya ma mmekọrịta ahụ adabaghị.
Ihe ndị kpatara esemokwu n’etiti di na nwunye
Enwere ọtụtụ ihe kpatara mmadụ nwere ike iji nọrọ dị anya na onye ọlụlụ ya:
Onye ahụ enwetụwo ọnwụ nke onye dị mkpa ma nọkwa na-eru uju. N'inye nke a, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị maka omume onye ahụ ịgbanwe nke ọma ma nwee ike igosi ntakịrị ihe dị na di na nwunye ahụ. Ọ bụrụ na nke a emee, ọ dị mkpa inye ya ịhụnanya niile kwere omume.
Nrụgide nke ọrụ, ezinụlọ ma ọ bụ nke onye òtù ọlụlụ natara O nwere ike ime ka ụfọdụ di na nwunye. Ọ bụrụ na nke a mee, ọ dị mkpa ka gị na di na nwunye ahụ kwurịta okwu ma guzobe ụkpụrụ niile ga-enyere gị aka imeri nsogbu a.
Lụ ọgụ n’oge niile nwere ike ịgwụ mmadụ ike na họrọ ịnọ dị anya na mmekọrịta ahụ. Arụmụka na esemokwu adịghị mma maka di na nwunye yabụ na ọ bụ ihe amamihe dị na ya ikwu banyere ihe na ịtụpụta azịza maka ya.
Na-ata ahụhụ n'ihi ekwesịghị ntụkwasị obi O bu ihe ozo n’aru ndi mmadu g’enwe ike ikewapu ha n’ebe di ha ma obu nwunye ha no.
Otu esi eme ma ọ bụrụ na onye òtù ọlụlụ ahụ dị anya
Ozugbo achoputara ihe na-akpata nrughari di otu a, odi nkpa ichota ihe ozo ka njikọ a ghara imebi:
Ọ dị mkpa ịnọdụ n'akụkụ di na nwunye na juo ya nwayo nwayo ihe kpatara igba di otu a.
Ọ bụrụ na i nwere ọmịiko n’ebe onye òtù ọlụlụ gị nọ, ọ ga-enyere gị aka ịma otú obi dị gị na nwee ike idozi nsogbu ahụ.
Ewela iwe ma soro onye gị na ya nọrọ. Ọ bụrụ na nke a emee, ihe ga-aka njọ ma ọ ga-esi ezigbo ike inwetaghachi njikọ ahụ.
Na nkenke, ọ bụrụ na onye òtù ọlụlụ gị dị anya, ọ dị mkpa ịmata ihe kpatara mkpali ọnọdụ a na gbalịa ime ka ihe niile dị otú ọ dịbu Nkekọ dị n’etiti di na nwunye ahụ dị mkpa ma lekọta anya ka o kwere mee iji gbochie di na nwunye ahụ ikewa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Mmekọrịta » Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na di na nwunye ahụ dị anya
5 ihe ị ga-eme kwa ụbọchị iji nwee ahụ ike